Fotoana: 2020-07-10 Comment: 21
Soa ihany aho fa afaka miara-miasa amin'ny labiera eto an-toerana, ary nanandrana tamin'ny fomba fampidirana kafe sy labiera isan-karazany. Hiresaka momba ny foto-piainan'ny labiera fototra hafa aho. Inona ny hevitrao? Zarao amiko ny zavatra niainanao amin'ny fomba fanaovana labiera amin'ny tsiro samihafa amin'ny alàlan'ny aaron@nbcoff.com, hamaly anao avy hatrany aho.
Previous: Famoahana labiera miaraka amin'ny tsiro kafe
Next: Tombontsoa ho an'ny mpiasa sy ny mpanjifa ny kolontsaina orinasa